Maninona Isika | FELVIK Eyelashes Co., Ltd.
Felvik, dia marika voasoratra avy any Shina an'ny volomaso hosoka sy famatsian-maso eyelashes hafa mifandraika amin'izany.
Miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Chengdu, faritanin'i Sichuan, tanàna mandroso indrindra any atsimo andrefan'ny China sy ny orinasa miorina ao anaty Mongolia, ny avaratry ny China, i Felvik dia manolo-tena hanome volomaso tsara kalitao amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra, na inona na inona lehibe na kely na vao nanomboka ny orinasa, ny raharaha rehetra dia amin'i Felvik. Felvik dia manolotra volomaso sandoka erak'izao tontolo izao.
Andalana vokatra vita amin'ny eyelashes Felvik
Volomaso tena Mink tena tsy misy dikany
Volomaso sandoka sandoka
Maninona no miasa miaraka amin'i Felvik
Ekipa manan-talenta manana traikefa & matihanina no manome anao ny vokatra tsara indrindra amin'ny eyelash ary serivisy hanatsarana ny orinasanao ao amin'ny Eyelashes Products sy ny sehatry ny hatsaran-tarehy maro hafa. Ny olona Felvik dia mazoto amin'ny faharetana; Hanolotra traikefa nahafinaritra anao izy ireo.
Fiantsenana iray Stop
Maody maherin'ny 500 ho an'ny fifantenana. Ny santionanao sy ny sarinao dia azo anaovana fanandramana fanandramana.
Ekena ihany koa ny fonosana volom-borona namboarina sy ny fitaovana fanaovana makiazy hafa.
Fitaovana avo lenta
Ny fitaovantsika rehetra dia miaraka amin'ny fifehezana kalitao henjana ary ny vokatra rehetra dia vita amin'ny tanana mba hiantohana ny kalitaony.
Ny volon'ny mink nampiasainay dia volom-borona mink 100% tena izy, malefaka, mampientam-po, malefaka. Ny eyelashes azo ampiasaina rehetra dia afaka mampiasa in-20-25 miaraka amin'ny fikirakirana sahaza.
Quantity momba ny filaminana malefaka
Quantity famoahana minimum kely indrindra ho an'ny vokatra tsy miandany ary ny fangatahana MOQ takatry ny vola ho an'ny vokatra namboarina
Ny ekipa Felvik dia manome serivisy OEM sy ODM amin'ny kapoka sy fonosana. Ny ekipa mpamorona matihanina Felvik dia hanampy anao hanatsara ny orinasanao amin'ny alàlan'ny famolavolana fonosana manokana miaraka amin'ny marika manokana. Mba hahatanteraka ny hevitrao dia manana mpamorona matihanina i Felvik hanao ny famolavolana boaty.
Ny kalitao no lakilen'ny fitomboan'ny orinasa hatrany. Felvik dia mifehy kalitao henjana amin'ny fitaovana rehetra alohan'ny famokarana sy ny fifehezana kalitao henjana ny vokatra vita rehetra alohan'ny fandefasana, ny vokatra rehetra azonao avy aminay dia azo antoka kalitao. Serivisy aorian'ny fivarotana 100% rehefa niseho ny fitarainana.